Kooxaha Microsoft ee macOS waa la cusbooneysiin doonaa mar kale dhammaadka bisha Ogos oo lagu darayo xakamaynta buuqa | Waxaan ka socdaa mac
Kooxaha Microsoft ee macOS ayaa dib loo cusbooneysiin doonaa dhammaadka bisha Ogosto iyada oo lagu darayo xakamaynta buuqa
Microsoft waxay dooneysaa qalabkeeda isgaarsiinta kooxeed ee khadka tooska ah inay u noqoto tartan adag FaceTime iyo kuwa kale macOS. Waxaa dhawaan la cusbooneysiiyay iyadoo shaqada wadaagga maqalka waxaana sidoo kale la sheegay inay cusbooneysiin kale imaan doonaan waqti dhow taas oo qalabka ka sii fiicnaan doonta. Waxaan lahaan doonnaa mid ka mid ah sheekooyinkan cusub bisha Ogos ee sannadkan shaqada xakamaynta buuqa taasi oo horeyba uga shaqeynaysay Windows muddo dheer.
Muuqaalka xakamaynta buuqa ayaa lagu soosaaray Kooxaha Microsoft ee 2020 ee kombuyuutarka wuxuuna hadda u bilaabmi doonaa dadka isticmaala Mac dhammaadka Ogosto. Oktoobar 2020, isticmaalayaasha Windows iyo Shaah waxay kala dooran karaan seddex heer oo ah cabudhinta buuqa iyadoo la adeegsanayo algorithms. Muuqaalkan waxaa laga sugayay Mac ilaa iyo markii la sii daayay, laakiin waxay umuuqatay inaysan waligeed imaan doonin. Ugu dambeyntiina shirkadda ayaa ku dhawaaqday in dhamaadka bisha Ogosto waxaan ku raaxeysan karnaa shaqadan Mac.
Isku hagaajinta otomaatiga ah waxay u oggolaaneysaa ciribtirka sawaxanka asalka ah ee ku saleysan buuqa deegaanka. Doorashada ikhtiyaarka "hooseeya" waxay baabi'in doontaa buuqa joogtada ah sida qaboojiyaha. Ugu dambeyntiina, waxaan dooran karnaa heerka "sare" ee baabi'in doona buuq kasta oo aan ahayn hadalka aadanaha. Hadda, waxay u muuqataa in macOS-ka shaqeynta xakamaynta dhawaaqa ay yeelan doonto oo keliya astaamaha otomaatigga iyo baasaska ee 'Macs' oo leh processor-ka M1. Dejinta sare lama heli doono, iyo si daacad ah, cidina ma oga sababta.
Waxaan bilaabi doonnaa inaan soo bandhigno tan dhamaadka Abriil waxaan rajeyneynaa inaan dhameystirno soo saarista dhammaadka bisha Ogos. Dejinta sare looma heli karo dadka isticmaala Mac oo leh processor M1.
Si tartiib tartiib ah ayuu arjiga u sameynayaa farqiga u dhexeeya kuwa u baahan qalab noocan ah iyo cusboonaysiinta badan ee ay bixiyaan, fiican ee isticmaalayaasha iyo shirkadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Kooxaha Microsoft ee macOS ayaa dib loo cusbooneysiin doonaa dhammaadka bisha Ogosto iyada oo lagu darayo xakamaynta buuqa
Natiijooyinka maaliyadeed ee Apple rubuca labaad ee 2021: Abriil 28.